Garsoore ilaa xog-haye – Nolasha Xasan Fareey | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Garsoore ilaa xog-haye – Nolasha Xasan Fareey
Garsoore ilaa xog-haye – Nolasha Xasan Fareey
Muqdisho – Hassan Mohamed Mohamud oo ku magac dheer Xasan Fareey,waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho,gaar ahaan degmada Boondheere,01-October-1957,waa mid ka mid ah shaqsiyaadka aadka loogu qadariyo Sportiga dalka gaar ahaan kubadda cagta,waxa uu ciyaaraha kusoo galay heer cayaaryahan isaga oo ugu danbeyn u wareegay dhanka garsoorka oo uu gaaray heer caalami.
Xasan Fareey waxa uu yaraantiisii ahaa qof aad u jecel waxbarashada, isaga oo gaaray ilaa iyo heerka 1aad ee jaamacadda, waxa uu kabaxay jaamacadda Umadda Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta Lafoole.
1966 – 1971 waxa uu Xasan dhiganayey dugsiga hoose ee iskuulka,isaga oo halkaas kaga baxay iskuulkii Boondheere ee ku yiilay degmada Boondheere.
1971 – 1974 Xasan Fareey waxa uu dugisa dhexe kaga baxay iskuulkii Xamar.Intii u dhaxeysay 1974 – 1978, Fareey ayaa heerka ugu danbeeya ee iskuulka waxa uu ku dhameeyay Aqoon-Darsan School.
1982 – 1985 Xasan Fareey ayaa ugu danbeyn darajada koowaad ee heerka jaamacadda waxa uu kaga dhameystay Jaamacadda Umadda,qeybta Lafoole,isaga oo bartay Physical fitness ama dhismaha jirka.
Xasan waxa uu ahaa mid aad u jecel in uu wax badan kasoo muuqdo una safto kooxaha xilligaasi ciyaari jirey iyo xulka qaranka,Xasan waxa uu cayaaraha kusoo galay heer degmo, isaga oo u saftay degmada Boondheere ee Gobalka Banaadir.Fareey uma suura gelin in uu heer wanaagsan ka gaaro,Bandhiggiisa ugu wanaagsan ee cayaaraha ayaa ah in uu keliya kasoo muuqday kulamada degmooyinka G.Banaadir.
Kulankii ugu horeeyay oo gudaha waxa uu dhexdhexaadiyey kooxaha Batroolka iyo Municia, halka ciyaartii ugu xasuusta badneyd ay aheyd kulan dhex marey kooxaha Horseed iyo Jeenyo,ciyaar ay 1 -0 ku guuleysatay Horseed.
Markii ugu horeysay oo uu dibadda garsoore kasoo noqday waxay aheyd 1989,kulan ka tirsan koobka kooxaha xiriirka CAF, una dhaxeysay – Ismailia Vs Bagbag ee waddanka Za’iir,Xasan ayaa ciyaartaasi ka ahaa caawiyaha labaad ee kulanka.Fareey waxa uu garsoore heer caalami ahaa intii u dhaxeysay 1989-2002.
Kulamadii ugu waa weynaa ee uu Xasan dhexdhexaadiyo waxaa kamid ah ciyaar katirsan tartanka CAF 24th Cup of Nations kaasi oo dhacay 06/09/02,wuxuuna dhex maray dalalka Uganda Vs Ghana.
Xilalka uu soo gabtay Xasan Fareey.
1988– 1990 Xoghayaha fulinta Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
1991 – 1997 kuxigeenka xoghayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
1997:Xoghayaha fulinta Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed
2004 – 2005 kuxigeenka xoghayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed
2014 Xoghayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaaliyeed.
2016 – 2017 Waxa uu xubin ka ahaa Guddiga Caf qeybta dhalinyarada koobka qaramada qaaradda Africa oo ay da’dooda ka hooseyso 17 jirada.
2018 – 2020 Waa xubin ka tirsan Guddiga Caf qeybta dhalinyarada koobka qaramada qaaradda Africa oo ay da’dooda ka hooseyso 17 ,20,iyo 23 jirada.
Previous: Seddex dhacdo oo aad ugu baahan tahay in aad ka ogaato kulanka Elclasico
Next: Ivan Rakitic: “Real Madrid ma ahan mid xariif ah”
Arsenal oo ka mid noqotay kooxaha daneynaya Ruben Neves